Daawo muuqaalka: Salaadiin iyo waxgarad Muqdisho ku kulmay oo qodobo ka soo saaray maamul u sameynta gobolka Hiiraan |
Daawo muuqaalka: Salaadiin iyo waxgarad Muqdisho ku kulmay oo qodobo ka soo saaray maamul u sameynta gobolka Hiiraan
Kulan balaaran oo ay ka qeyb galeen, Waxgarad, Salaadiin, culumaa’udiin, aqoonyahano iyo saraakiil ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayey arrimo ku saabsan maamul u sameynta gobolka Hiiraan.
Kulankan ayaa lagu lafa guray qaabka ugu haboon ee maamul la soo doortay loona dhan yahay, looga sameyn karo gobolka Hiiraan iyo sidii arintaas ay mowqif mideysan uga qaadan lahaayeen qeybaha bulshada gobolka Hiiraan.
Waxaa kulankaas ka hadlay Boqor Faarax Cabdi Guure oo ah gudoomiyaha golaha Salaadiinta Soomaaliyeed, kana mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, kaasoo sheegay in kulankan ay u qabteen sidii shacabka degan gobolka Hiiraan loogu madax baneyn lahaa iney sameystaan maamul rabitaankooda ku yimid.
Waxaana kulankaas ka hadlay odayaal kala duwan oo ku hadlayey magacyada qabaailka dega gobolka Hiiraan, iyadoo ay goob joog ka ahaayeen odayaal fara badan oo laga xusi karo Nabadoon Maxamuud Axmed Xooshow (Korontaale) Nabadoon Cabdi Shiikh Faarax, Iimaan C/llaahi khaliif Rooble, Suldaan C/casiis Xaaji Daffe, Suldaan Cali Suldaan Cabdi, Jen. Baaltaag iyo xubno kale oo fara badan, waxaana gebagebadii kulankaas laga soo saaray war-saxafadeed ka kooban sadex qodob oo kala ah.
-In talada ku saabsan maamul sameynta loo celiyo reer Hiiraan.
-Inaan lagala tashan dhismaha maamulka dadka leh danaha shaqsi iyo kuwa siyasadeed ka leh maamulka.
-In loo saaro guddi kala xaajooda dowlada iyo madaxweynaha arrimaha maamul u sameynta gobolka Hiiraan iyo in dowladau gacan ka geysato maamul u sameynta gobolkaas.
Waxaa kulankaas laha sheegay in natiijooyin wanaagsan oo hordhac ay ka soo baxeen kulan horey Muqdisho ugu dhexmaray madaxweynaha Somalia iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan, kaasoo ku saabsanaa qaabka ugu haboon ee maamul madax banana, oo cadaalad ku dhisan loogu sameyn karo gobolka.